Gaasta Dhaawaca Gawaarida ee Isweydaarsiga Kuleylka - CIXI DongFENG SEALING & PACKING Co., Ltd
Hoyga>Products>Xaragada Dhaawaca Gaaban
Gaasta Dhaawaca Gawaarida ee Beddelka Kuleylka
Goomaatada nabarka ee muquuninta leh giraan banaanka ah iyo giraanta gudaha, waxay ka kooban tahay "V-qaab" (ama "W-qaab") cajalad bir ah iyo cajalad aan toos ahayn, oo midba midka kale ka sarreeyo isla markaana si joogto ah u dhaawacma. Si loo dhejiyo cajaladda birta, labadaba barta ay ka bilaabanayso iyo barta dhamaadka waa taam la alxamay. Iyada oo taageero ka heleysa giraanta dibadda iyo giraanta gudaha, waxaa loo isticmaali karaa wejiga kor u kaca. Baaxadda Weyn ee Featurea ee xaaladaha shaqada ee la aqbali karo. Waxaa loo isticmaali karaa heerkulka sare, cadaadiska sare iyo heerkulka aadka u hooseeya ama vacuu ...
Goomaatada nabarka ee muquuninta leh giraan banaanka ah iyo giraanta gudaha, waxay ka kooban tahay "V-qaab" (ama "W-qaab") cajalad bir ah iyo cajalad aan toos ahayn, oo midba midka kale ka sarreeyo isla markaana si joogto ah u dhaawacma. Si loo dhejiyo cajaladda birta, labadaba barta ay ka bilaabanayso iyo barta dhamaadka waa taam la alxamay. Iyada oo taageero ka heleysa giraanta dibadda iyo giraanta gudaha, waxaa loo isticmaali karaa wejiga kor u kaca.
Baaxad ballaaran oo ah shuruudaha shaqada ee la aqbali karo. Waxaa loo isticmaali karaa heerkulka sare, cadaadiska sare iyo heerkulka aadka u hooseeya ama xaaladaha faakiyuunka. Beddel iskudhafka qalabka gaasku waa in wax laga qabto dhibaatada daxalka kiimikada ee warbaahinta kala duwan ee ku wajahan goomaha.
Ma aha shuruudaha adag ee saxda ah ee dusha sare ee flange. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiro dabaqyada dusha sare leh
Rakibo Easy iyo isticmaalka anfacaya.
Wax soo saarka & Nooca
Xaragada Dhaawaca Gaaban ka buuxaan Graphite
(Deegaanka Oxidizing) -240 ~ + 550 ℃ ； (Deegaanka aan Oxidizing) -240 ~ + 870 ℃
(Biyaha kulul hoostooda, saliid iwm) 30 Mpa; (Saliida uumiga, gaasaska iwm) 20 Mpa
Gaasta Dhaawaca Gawaarida leh ee laga buuxiyo Asbestos
Gaasta Dhaawaca Gawaarida oo ay ka buuxsameen PTFE
Gaskets-ka Dhaawaca Gawaarida waxaa badanaa loo isticmaalaa filtarka & dhuumaha, weelka cadaadiska, kondenserka, is-beddelka kuleylka ee saliidda, kiimikada, metallurgy, markabka iyo warshadaha farsamada.